उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने सोच बनाउनु भएको छ भने, फिनल्याण्ड तपाइँका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्दछ । एक अध्ययनका अनुसार सन् २०१८ को अगस्त सत्रका लागि फिनल्याण्डका विभिन्न अप्लाइड साइन्सेज युनिभर्सिटीजमा भर्नाका लागि आवेदन भर्नेहरूमा EU/EEA बाहेक अरू देशहरूबाट आवेदन गर्नेहरू मध्य सबभन्दा धेरै संख्या नेपालबाट थियो । सन् २०१६ सम्म कुनै पनि देशको विद्यार्थीलाई फिनल्याण्डमा कलेज फि लाग्दैनथ्यो । तर हाल शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शुल्क नै तिर्नु परे पनि तुलनात्मक रूपमा यहाँका केही कलेजहरूले कम शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । त्यसका अलावा एक वर्षको लागि तोकिएको क्रेडिट पूरा गरेको खण्डमा निश्चित प्रतिशत शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था पनि छ । अतः कलेज शुल्क अलिकति महँगो हुँदैमा आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति नहोला ।
विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया
विद्यार्थी भिसाको लागि सबभन्दा पहिला यहाँको कुनै पनि कलेजमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ । कलेज भर्ना वर्षमा २ पटक हुने गर्दछ । पहिलो अगस्त सत्रका लागि डिसेम्बर – जनवरीमा (१ महिनाभन्दा बढी नै) र दोस्रो जनवरीदेखि शुरू हुने सत्रका लागि सेप्टेम्बरको पहिलो पाक्षिक (१ देखि १५ सम्म) । अगस्त सत्र प्रायः गरी अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्छ । तसर्थः धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि अध्ययनका लागि यसै सत्र छान्ने गरेको एउटा परम्परा नै बनेको छ ।
सर्वप्रथम आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र तह के हो ? त्यसमा प्रष्ट हुने । कस्तो खालको कलेजमा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको हो ? त्यसमा पनि पहिले नै स्पष्ट हुने । फिनल्याण्डमा दुई प्रकारका कलेजहरू हुन्छन् – UAS अर्थात University of Applied Sciences र अर्को चाँहि विश्वविधालय नै जस्तै University of Helsinki, Aalto University, Universityof Jyväskylä, University of Turku आदि । UAS खासमा नेपालको सिटिइभिटी जस्तै बन्दा फरक पर्दैन । तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने UAS हरूमा पनि विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै जुन तहको लागि जति बर्षको अध्यापन हुने समयावधी हुन्छ त्यति नै वर्ष र करिब करिब उस्तै किसिमको अध्ययन अध्यापन हुने हो । UAS को अध्यापन अलिबढी अभ्यासमा निर्भर रहन्छ भने विश्वविद्यालको चाँहि अलि बढि प्राज्ञिक हुने अनुभवीहरू बताउँछन् ।
शुल्क र छात्रवृति
आम्दानीका हिसाबले कलेज खर्च महंगो नै हो । तर कुनै पनि सेमेस्टर या वर्षभरिका लागि तोकिएको कोर्ष पूरा गरेको खण्डमा भारी मात्रमा कलेज शुल्कमा कटौती हुने व्यवस्थाका कारण शुल्क तिर्नलाई त्यति गार्हो नहोला । विशेषतः आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कलेजको शुल्क, छात्रवृतिकाबारे सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयका वेभसाइटहरूमा विस्तृतमा उल्लेख हुन्छ नै तर उदाहरणका लागि केहि कलेज, युनिभर्सिटीको शुल्कसम्बन्धी विवरण तल प्रस्तुत गरेको छु ।
4000€ (50% can be waived in the next academic year ifastudent completes 55 credits in the first year)
Bachelor’s in Social Services
5-19 January, 2022 (Joint Application)
7000€ (2100€ can be waived if you get scholarship)
5.1-8.4 2022 (First come first serve basis if you’re eligible, you will be invited for an online entrance exam)
5-19 January 2022 (Joint Application)
International Business and Logistic (Bachelor’s)
Master´s Degree in any stream
9800€ (100% scholarships available for highly motivated students)
अंग्रेजी भाषा परिक्षा
प्रायः कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषाको दक्षता जाँचका लागि IELTS र TOEFL नै स्वीकार गर्दछन् । केहि कलेजहरूले चाँहि अंग्रेजी भाषाको लागि आफैले परिक्षा लिने गर्दछन् । जसमा लिखितका साथै अन्तरवार्ता पनि हुने गर्दछ । सामान्यतयाः Bachelor’s degree को लागि IELTS मा overall band score 6, र writing test score 5.5 भए हुन्छ । तर मास्टर्सका लागि न्युनतम each band score6हुनुपर्छ ।
भर्ना प्रक्रिया (Admission Process) र आवश्यक शैक्षिक योग्यता (Qualification requirements)
जनवरी ५ देखि १९ सम्म Joint Application समय शुरू हुन्छ । जसमा एउटै निवेदन (Application) बाट ६ वटा कलेजहरूमा भर्नाको लागि आवेदन भर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा कलेजमा नभएपनि अर्को कलेजमा भर्ना पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै केहि कलेजहरूले सिधैं भर्ना आवेदन पनि लिन्छन् । यस्तो सिधैं भर्ना लिने कलेजहरूले नोभेम्बरको अन्तिम हप्तादेखि जनवरीको अन्तिम हप्तासम्म भर्ना आव्हान गर्ने गर्दछन् । तुलनात्मक रूपमा ब्याचलर्समा भर्ना पाउन सजिलो हुन्छ । ब्याचलर्स डिग्रीका लागि निवेदनमा सामान्य जानकारी भर्ने, आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र अंग्रेजी भाषा परिक्षणको प्रमाणपत्र संलग्न गरे पुग्दछ । तर मास्टर्स डिग्रीका लागि अलि गतिलै खालको Motivation Letter र Research Proposal पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
Some university may accept3years bachelor’s degree too
भर्ना कसरी पाउन सकिन्छ त्यसबारे विस्तृतमा हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
थप जानकारी सम्बन्धित कलेजको वेभसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ । केहि कलेजको वेभसाइट तल राखेको छु ।
केहि महत्वपूर्ण लिंकहरू
केहि प्रश्न या जिज्ञासाहरू भए कमेन्टमा लेख्नुहोला ।